MAXAY U FASHILMEEN URUR DIIMEEDYADA SIYAASADEED? [BAADIGOOB XAQIIQ] (QEYBTII 4AAD) – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Tan iyo markii la riday dawladdii Cusmaaniyiinta, waxaa dunida Islaamka ka abuurmay urur diimeedyo siyaasadeed oo fara badan, oo aragtiyo iyo madaahib kala duwan xanbaarsan. Waxayna dhamaantood tiigsanayeen iney yagleelaan dawlad Islaami ah oo balaaran sida tii Cusmaaniyiinta. Waxaa xusid mudan, eyna tahay in la bidhaamiyo markii horaba dumintii dawladdii Cusmaaniyiinta iney qaar ururadaas kamid ah ka qeyb qaateen duminteeda. Sanadku markuu ahaa 1703dii ayuu dhashay aabaha iyo aasaasaha urur diimeedka loogu magac daray ‘Alwahhabiyyah’ wadaaddkaas oo lagu magacaabi jiray Shiikh Maxammed bin Cabdulwahaab. Wadaadku wuxuu ku dhashay tuulo la yiraahdo ‘Al-cuyayna’ ee dhulkii loo yiqiin ‘Al-najd’ maantana loo yaqaaan Sacuudi Carabiya.
Wadaadku wuxuu ka dhashay qabiil weyn oo la yiraahdo Banuu Tamiim. Wadaadku wuxuu saaxiib dhow la ahaa gaashaanbuurna la sameystay nin la oran jiray Maxammad bin Sacuud oo ah awoowaha qoyska haatan talada dalka Sacuudiga haya ee reer Aala-Sacuud. Labadaan nin waxay ku heshiiyeen in shiikh Maxammad bin Cabdulwahaab iyo raaskiisa Aala-shiikh ey madax ka noqdaan wixii ku saabsan arimaha diinta, Maxamed bin Sacuud iyo qabiilkiisana ey masuul ka noqdaan arimaha siyaasadda. Dawladda Cusmaaniyiinta oo xiligaas ka talineysay dhulkaasna lala dagaalamo oo Najd oo dhan laga xoreeyo. Sanadku markuu ahaa 1744kii ayaa labadaas nin u suurto gashay iney yagleelaan maamulkii ugu horeeyay ee Sacuudiga, waxayna u bixiyeen isu-taga Dirciyah oo aheyd gobol.
Yeelkadeedee, innahaas kadib, Sh Maxammaed bin Cabdulwahhaab oo marakan miciyeystay wuxuu guda galay inuu la dagaalamo cid alaale iyo cidii ka aragti duwan – isagoo u cuskanaya in cidaan manhajkiisa heysan ey yihiin mushrikiin gaalo ah, dhiigooda iyo maalkoodana uu xalaal yahay(ابن بشر، ص45-46. ). Wadaadka isagoo garab ka helaya dawladdii Sacuudiga uu wax ka yagleelay ayuu wuxuu qaaday duulaamo badan oo uu ku qaaday shacabka Muslimiinta ah ee deganaa dhulka Sacudi Carabiya. Xiligaas shacabka Sacuudiga waxay heysteen dhariiqo kamid ah Suufiyadda oo la yiraahdo ‘Naqshbandi’ (oo ku abtirsata shiikh Bahaa’uddiin Maxammed Naqshbandi Bukhaari [1318–1389]).
Wuxuu wadaadkan ina Cabdulwahhaab bilaabay inuu culumada dhariiqadaan birta ka aslo maalkoodana soo qaniimeysto. Buuga caanka ah ee loo yaqaan ‘Aldurar alsanniyah’ oo ka kooban dhigaalo ey qoreen culumo reer Sacuudiya ah, wuxuu ina Cabdulwahaab ku xusayaa inuu duulay “qaswah’ in ka badan 300 oo duulaan, isagoo oranaya waxaan ku duulnay gaaladii deganeyd Sacuudiga – wuxuuna u xusayaa tuulo tuulo iyo qabiil qabiil, wuxuuna ku xukumayaa dhamaantood gaalnimo, wuxuuna baneynsanayaa dhiigooda iyo maalkooda ( ابن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد.). Tusaale, wuxuu isla buuga Durar ina Cabdulwahaab ku leeyahay waxaan ku duulnay gaaladii reer Carab Shaam, waxaana ka dilnay 120, waxaan kasoo qaniimeysanay 5000 oo geel ah. Sida uu kusoo waramayo taariikhyahanaka lagu magacaabo Cabdulraxiim Cabdulraxmaan intaas kuma ekaan wadaadka ina Cabdulwahhhab ee wuxuu ku baxay oo jidgooyo u dhigtay dawladdii Muslimiinta oo dhan matalaysay ee Cusmaaniyiinta, wuxuu u geli jiray jidka oo isbaaro inta uu u dhigto ayuu maalkana dhici jiray askartana layn jiray.
Sidoo kale taariikhyahanka Cismaan Ibnu Bashiir ee wahaabiga ah wuxuu soo warinayaa in ina Cabdulwahaab iyo ninkey heshiiska wada galeen ey ku duuleen magaalooyinka barakeysan ee Makkah iyo Madiinah – iyagoo ku doodaya waxaa degan Mushrikiin – wuxuu taariikhyahanku ku darayaa iney halkaas xerta ina Cabdulwahaab ey ku burburiyeen qubuuro fara badan, dadkii magaalooyinka daganaana lagu qasbay iney qaataan manhajka ina Cabdulwahaab. Taariikhyahanka Cismaan ibnu Bashiir ee wahaabiga ah ee lagu kalsoonyahay oo qoray taariikh nololeedka shiikhiisa Maxammed Cabdulwahaab wuxuu qirayaa in shiikhu uu aaminsanaa in dadkii xiligiisa deganaa jasiiradda carabta ey islaamnimada ka laabteen oo mushrikiin qubuuro caabuda noqdeen, eyna ka gaalnimo iyo shirki badan yihiin mushrikiintii Quraysh.
Ina Bashiir wuxuu buugiisa ‘Cinwaanka Najd’ ku xusayaa in maalin maalmaha kamid ah uu Shiikh Maxamed Cabdulwahaab ku duulay tuulada la yiraahdo ‘Cuyaynah’ si ey usoo laayaan mushrikiinta degan tuuladaas, xoolahoodana ey usoo qaniimaystaan. Taariikhyahanku wuxuu sheegayaa in markii Shiikh Maxamed uu tuulada gaaray uu kula heshiiyay Muslimiintii la socotay (waa ciidankiisee) iney dilka ka bilaabaan Gudoomiyaha tuulada oo lagu magacaabi jiray Cismaan bin Mucammar oo xiligaas salaad jimce u taagnaa. Markii gudoomiyaha uu salaaddii ka baxay ayeey isagoo ku fadhiya saligiisii ku dileen, shiikh Maxamed bin Cabdulwahaabna wuxuu yiri; kani waa kaafir kani waa mushrik.
Isku soo wada duuboo, wadaadka ina Cabdulwahaab iyo urur diimeedkiisuba waa mid lagu aasaasay gaaleysiinta ciddaan manhajkooda heysan, qubidda dhiiga dadka Muslimiinta ah ee aan waxba galabsan iyo xalaalaysiga maalkooda – waana tan hadda heysata dadka Muslimiinta ah oo dhashii ururkaasi ey meelwalba iyo goorwalba ku dooxayaan dadka Muslimiinta ah. Bal eegoo u firso sideey iskugu midka u yihiin af iyo dhaqanba, ururkii ina Cabdulwahaab iyo urarada haatan jira oo kaas kasoo farcamay sida; Daacish, Al-Qaacida, Boko-Xaaraam iyo Al-Shabaab. Ina Cabdulwahaab qofkaan isaga raacin wuxuu u ahaa Mushrik dhiigiisa iyo maalkiisaba ey xalaal yihiin, qubuurahanna colaad ba’an baa kala dhexeysay. Daacish, Al-Qaacida, Boko-xaaraam iyo Al-shabaab waxaan uun ey sameeyaan waa intaas, Muslimiinta gaaleysii, dhiigooda iyo maalkooda xalaaleyso, qubuurahanna burburi.
Taariikhyahannada reer galbeedka qaarkood iyo kuwo Muslimiin ahba waxay soo tabiyaan, in wadaadka ina Cabdulwahaab uu xiriir adag oo dhow la lahaa boqortooyada Ingiriiska, oo iyada guluf weyn ugu jirtay iney dhidibada u siibto dawladdii Muslimiinta ee Cusmaaniyiinta ee fadhigeedu ahaa Turkiga. Ingiriisku waa ku dhici waayeen dagaal fool-ka-fool ah iney la galaan Cusmaaniyiinta xiligaas, oo waxay ka baqayeen iney Muslimiinta mideeyaan. Waxay heleen fursad markey ogaadeen in nin la yiraahdo Maxammad bin Cabdulwahaab uu kasoo baxay dhulka Najd kaas oo mucaarad hubeysan ku ah dawladda Cusmaaniyiinta. Jaajuuskii weynaa ee u dhashay wadanka Ingiriiska ee boqortooyada Ingiriiska u qaabilsanaa sirdoonka barriga dhexe, laguna magacaabi jiray; Mr Hempher, wuxuu xusuus qorkiisa ku qoray inuu la kulmay wadaadka lagu magacaabo Maxamed bin Cabdulwahaab kulana kulmay magaalada Basra. Wuxuu jaajuuskaan Ingiriiska sheegayaa in isaga oo matalaya Boqortooyada Ingiriiska uu heshiis la galay ina Cabdulwahaab iney iska kaalmaystaan sidii lagu ridi lahaa dawladdii Cusmaaniyinta.
La soco qeybta 5aad..
-Moosa, Ebrahim: What Is a Madrasa? (2015)
Nawaf E. Obaid (September 1999). “The Power of Saudi Arabia’s Islamic Leaders”. Middle East Quarterly. VI (3): 51–58.
-A History of the Arab Peoples by Albert Hourani (1992
Yaaqii iyo Shaakir: Taariikhda islaamka cuseyb iyo qadiim (2010).
عنوان المجد في تاريخ نجد، تأليف: ابن بشر، ص45-46-
-John L. Esposito (edited by), The Oxford Dictionary of Islam, Oxford University Press (2004), p. 296
يوسف الرفاعي. نصيحة لأخواننا علماء نجد.-
ابن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد.-
عبد الرحيم عبد الرحمن: وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي باشا، مج2ص 721-
-Ibnu Bashiir: Taariikhda Najd (pp97)
-The Saga of “Hempher,” Purported British Spy by Daniel
Pipes, January 1996.
-Confessions of a british spy and british enmity against
islam archived 9 may 2015 at the wayback machine. 8th
edition, hakikat kitabevi, waqf ikhlâs.